Madaxweynaha Galmudug oo xafiiskiisa ku qaabilay sii-hayaha wasiirka gargaarka XFS+Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Madaxweynaha Galmudug oo xafiiskiisa ku qaabilay sii-hayaha wasiirka gargaarka XFS+Sawirro.
Madaxweynaha Galmudug oo xafiiskiisa ku qaabilay sii-hayaha wasiirka gargaarka XFS+Sawirro.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa xarunta Madaxtooyada ku qaabilay sii hayaha Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka XFS, mudane Xamsa Saciid Xamsa iyo wafdi uu hoggaaminayo oo arrimo shaqo u tagay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb .
Madaxweynaha ayaa waxbixin ka dhageystay sii hayaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Galmudug mudane Cabdiraxmaan(makaawe).
Madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalada adag ay wasaaraadu ka qabaneyso arrimaha, latacaalida musiibooyinka iyo halis wadareedka. Wafdiga ayaa manta halkaas gaaray ayadoo si wanaagsan loogu sooo dhaweeyay.
Previous articleSii hayaha Ra’iisul wasaaraha XFS “Ciqaabta iyo mihnadda Saxafinimo waa kala caaggan yihiin.[Sawirro]
Next articleCiidamada Amniga Gaalkacyo oo faah faahiyay howlgal ay kusoo qabteen waxyaabaha Maanka-dooriya.